/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Nwa oge (566-48-3)
SKU: 566-48-3. Category: ndị ọzọ na-
Nwa ogwu bụ onye mbụ ahọpụtara, ụdị I, onye na-eme ka aromatase aromatase jiri ọgwụgwọ estrogen-receptor cancer cancer dị mma na ụmụ nwanyị post-menopausal. Nne na-egbochi estrogen sitere na steroid ma ọ bụ ndụmọdụ. Ọ na-arụ ọrụ dị ka prohormone na 4-hydroxytestosterone, ...
Nwa nna (CAS 566-48-3) anaghị akpata ọtụtụ nsogbu ọ gwụla ma a na-emegbu ya. Mgbe ụfọdụ, ndị na-ewu ụlọ ga-eme mkpesa banyere nkwonkwo akọrọ, ngbanwe ọnọdụ ọnọdụ, mgbanwe libido, ma ọ bụ rashes, nke bụ ụdị niile nke AI. Ihe ọzọ na-emetụta ya bụ cholesterol dị mma (HDL) dị mma, n'ihi ya, ị ga-ele nri gị.